Uncedo lweqela yinkcubeko yethu ehambelanayo yenkcubeko, ukwabelana ngamava kumzi-mveliso, ukunqanda iimpazamo ezifanayo ezenziwe amaxesha amaninzi, abasebenzi bayancedana, bayaphuma okanye umntu unemfuno enzima yeshishini yokujongana ngokungxamisekileyo, onke amalungu eqela asebenza kunye, ukusombulula ingxaki ngokufanelekileyo, ukunceda abathengi ukugqiba umsebenzi ongxamisekileyo.
Yasekwa ngonyaka ka-2011, inkampani izinikele kuphuhliso kunye nokuthengiswa kweemveliso zeleyisi. Ine studio sayo yoyilo, igumbi lesampulu kunye nendawo yokugcina imveliso egqityiweyo. Lonke ixesha lophuhliso lwemveliso, kukho amalaphu amatsha kunye neendlela zokubonelela. Iinkonzo iimveliso zempahla yasekhaya neyangaphandle, iivenkile ezinkulu, iihypermarket, iimveliso zempahla ye-elektroniki, njl. Ngo-2017, waseka iSebe lezoRhwebo lwaNgaphandle, wavula iqonga elenziwa nge-China kwi-Intanethi, kwaye wathatha inxaxheba kwimiboniso yaphesheya. Amazwe athatha inxaxheba aquka iBangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Turkey kunye namanye amazwe.
Inkcubeko yeshishini izabalazela phezulu, umoya weqela lokuncedisana, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi kwiimveliso zeleyisi, ukwenza imeko yokuphumelela-yinjongo yethu engaguquguqukiyo.
Ubunye, ubuqinisekileyo, ubuchule bokuyila, ubungcali kunye nokusebenza ngokufanelekileyo. Umgangatho weemveliso bubomi beshishini. Inkonzo elungileyo yibhulorho yethu yokunxibelelana nabathengi. Zonke izimvo zabathengi yileli yenkqubela yethu, kwaye ukuthembela kwabathengi yeyona nto siyisebenzisayo.
Iqela loyilo olugqwesileyo
Imbeko kwishishini: iimveliso zithunyelwa kuMzantsi-mpuma Asia, eYurophu, inkonzo elungileyo kubathengi bamanye amazwe badumisa. Iimveliso zithengiselwa iinkampani zorhwebo ngengubo yasekhaya, ubuchule bokuyila, isantya sokuphendula ngokukhawuleza, inkonzo yobungcali yokuthengisa ngentengiso.
Imveliso esemgangathweni bubomi beshishini, kwaye ukuhlolwa kwemveliso kuqhuba kuyo yonke inkqubo yemveliso yethu. Ukusukela ekuhlolweni kwemveliso yelaphu lembungu, ukuhombisa, emva koko ukuya kumbala ogqityiweyo wemveliso, ukuhombisa okungahambiyo, ukuhlolwa, ukuhonjiswa. Yinjongo yethu ukuqinisekisa izinga eliphantsi kunye nomgangatho ophezulu weemveliso.
Izinto zethu zokusebenza zisebenza kakuhle kwaye zitshiphu, ezona zixeko ziphambili zokwabelana ngezixhobo zenqwelomoya, zinokusekwa kwiimfuno zabathengi, iimeko zokuhamba ngenqwelomoya ngexesha elifanelekileyo kunye nokukhethwa ngokufanelekileyo kweendlela, ekuhanjisweni kwexesha. I-Ningbo Port lizibuko lesibini ngobukhulu e-China, kunye neenkonzo zokuhambisa ezikhawulezayo nezikhawulezayo kumazibuko amaninzi emhlabeni.